Home Wararka Muxuu soo kordhin karaa kulanka Somaliland ee maanta lagu qabtay Muqadisho?
Muxuu soo kordhin karaa kulanka Somaliland ee maanta lagu qabtay Muqadisho?
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan looga arinsanayo arimaha Somaliland iyo Soomaaliya. iyo sidii loo amba-qaadi lahaa wadahadallada labada dhinaca. Kulankaan aya ku soo aaday iyada oo dhawaan fashil uu ku dhamaaday kulan labad dhican oo lagu qabtay magalaada Jabuuti.
Sida MOL loo sheegay waxaa kulanka ka ka qeyb-galaya waxgarad la sheegay in ay matalayaan Somaliland iyo gudiga wadahadalka Soomaliya iyo Somaliland ee uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya.
Dad badan ayaa rumeysan in qaabka loo wajahayo arimaha Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay gaab qaldan oo dadka sii kala fogayn doona. Wadahadalkaan oo muhiimad gaar ah u leh labada dhinac ayaa lagu soo koobay in uu noqdo mid hay’ado NGO lacag looga cuno shirar waqti dhumis ah loo qabto shacabka.
Afartii sano ee la soo dhaafay ayaanan qabsoomin wadahdallo u dhaxeeya Dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland,waxaana fashilmay isku dayo dhowr ah oo la sameeyey oo garwadeen ka aheyd Dowladda turkiga.